सर्वसुलभ पाईने बेथुको सागका फाईदै फाईदा बेथु खानुका १६ वटा फाइदा
प्रकाशित मिति: फाल्गुन 24, 2076
न्युजडेस्क/ तपाँई हामीले खेतबारीमा देखिराखेको बेथुको साथ तपाईंको भान्सासम्म कत्तिको आईपुग्ने गरेको छ ? अथवा तपाँईले भान्सामा बेथुको साग कत्तिको पकाउने गर्नु भएको छ ? यदी छैन भने खाने गर्नुस। किनकी यो स्वादका लागि मात्र होइन स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा गर्छ।
बेथु दुई किसिमका हुन्छ। एक सामान्य हरियो पात भएको र अर्को रातो पात भएको। यसको प्रयोगले बिभिन्न रोबाट मुक्ति मिल्छ। मिर्गौलाको पत्थरी निकाल्नका लागि बेथुको साग उपयोगी मानिन्छ। यसका लागि आधा किलो बेथुको साग उमालेर छान्नुपर्छ र त्यसमा मरिच, जीरा र हल्का रुपमा सिधे नुन मिसाएर दिनमा चारपटक पिउने गर्नुपछ, मृगौलाको पत्थरी भएका बिरामीका लागि यो अमृत नै मानिन्छ।
बेथुको साग थुप्रै औषधीय गुणले भरिपूर्ण हुन्छ। यसमा खनिज तत्वको मात्रा अमलामा भन्दा बढी हुन्छ। बेथुले शरीरमा फलामको कमी हुन दिदैन। यसले आमाशयलाई बलियो बनाउँछ। बेथुमा फलाम, फस्फोरस, भिटामिन डी र क्षार धेरै मात्रामा पाइन्छ। यो शुक्रवर्धक र कब्जियत भगाउन लाभकारी मानिन्छ। यसले कलेजोसम्बन्धी रोग, अजीर्ण, ग्याँस, जुका, पत्थरी, पेट घोच्ने समस्यालगायतबाट मुक्ति दिलाउँछ।
भोक नलाग्ने, खाना ढिलो पच्ने, डकार आउने, पेट फुल्नेजस्ता समस्या हटाउन पनि बेथुको साग लाभदायक हुन्छ। पिसाब, मूत्राशय, मृगौलासम्बन्धी रोग निको पार्न र छालासम्बन्धी रोगमा समेत यसको उपयोग प्रभावकारी मानिएको छ। बेथुको तरकारी नियमित सेवन गरेमा वाथ यूरिक एसिड, रक्त र त्वचा बिकार टाढा हुन्छ।
बेथुको सबैभन्दा ठूलो गुण भनेको शरीरमा भएका सबै प्रकारका बिषहरुको निवारण गर्नु हो। यसकारण यसलाई बिषानिदान नाम दिइएको छ। बेथुमा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, क्याल्सियम र भिटामिन ए, मिनिरल्स र आइरन प्रचुर मात्रामा पाइन्छ। यसमा सोना धातु पनि पाइन्छ जो कुनै अन्य सागसब्जीमा पाइँदैन। औषधिका रुपमा बेथुका पञ्चाङ्ग अर्थात पाँच अंग (जरा, डाँठ, पात, फल र फूल)लाई प्रयोग गरिन्छ।
बेथुको साग खानुका फाइदाहरु :
१) जहिलेसम्म बेथुको सब्जी पाईन्छ, खाने गर्नुहोस। बेथुलाई पानीमा उमालेर पिउनुहोस। यसले पेटका हरेक प्रकारका रोगलाई पनि ठिक गर्छ।
२) बेथुले पेटलाई तागत दिन्छ र कब्जियत हुन दिँदैन। यसले पेटलाई सफा गर्छ।
३) दुई चम्चा बेथुको दाना एक गिलास पानीमा उमाल्नुहोस। पानी आधा सुकेपछि छानेर पिउनाले रोकिएको महिनावारी खुल्छ।
४) एक गिलास काँचो बेथुको रसमा सख्खर मिसाएर दैनिक पिउने गर्नुहोस, पथ्थरी गालेर झार्छ।
५) आयुर्वेदमा गरिएको एक अनुसन्धानले बेथुको साग नियमित खानाले स्तन क्यान्सरको सम्भावना कम हुने देखाएको छ। यसमा उपलब्ध सेलिनियम, ओमेगा ३ र ६ फैटी एसिड स्तन क्यान्सररोधक हुन्छ।
६) बेथुको १० ग्राम दानालाई करिव दुई मिलिलीटर पानीमा उमाल्नुहोस। ५० मिलिलिटर रहुञ्जेल उमालेपछि ताततातै पिउँनुहोस। यसरी एक महिनासम्म बिहान–बेलुका पिउनुहोस, जोर्नी दुखाईबाट तपाईलाई राहत दिलाउँछ।
७) बेथुलाई उमालेर निचोरेर रस पिउनाले र सागलाई सब्जी बनाएर खानुहोस। दुईकप बेथुको पात पिसेर बनाएको रसमा आधा कप तेल मिसाएर हल्का तताउनुहोस। जब पानी सुकेर तेलमात्र रहन्छ, त्यसलाई छानेर एक सफा सिसाको बट्टामा राख्नुहोस। त्यसलाई छालामा दैनिक लगाउने गर्नुहोस। लामो समय लगाइराख्ने गर्नुभएमा छालाका दाग, दाद, चिलाउने, कुष्ठरोग आदि रोग टाढा भाग्छ।
८) ऐमरैन्थ अर्थात बेथुको तेल र पेप्टाइडमा एन्टी इफ्लेमेन्टरी गुण हुन्छ, जसले दुखाई र सुजन कम गर्नमा मद्दत गर्छ। यो पुरानो स्थितिका लागि एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ जहाँ सुजनले स्वास्थ्यलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ।
९) डण्डिफोरमा बेथुका पातहरुको पेष्ट बनाएर लगाउँदा चाँडै पाकेर फुट्छ। सुजन भएमा त्यो ठाउँमा यसको लेप लगाउँदा सुजन टाढा हुन्छ।
१०) प्रोटिन रक्तमा इन्सुलिनको स्तर कम गरेर हार्मोन बढाएर भोकलाई दबाउँछ जसकारण भोकको महसुस कम हुन्छ। बेथुमा लगभग १५ प्रतिशत प्रोटिन हुन्छ जसले तौल घटाउन मद्दत गर्छ।
११) पिसाबमा रगत आउने समस्यामा पनि यो उपयोगी मानिन्छ। बेथुको पात पिसेर मिश्री मिलाएर सर्वत बनाएर ३ दिनसम्म लगातार पिएमा ठिक हुन्छ।
१२) अध्ययनका अनुसार ऐमरेन्थमा रहेको फाइबर र फिटोन्यूट्रीएन्ट्स नामक तत्वले रक्तचापलाई कम गर्नमा मद्दत गर्छ। जसकारण यो कोलेस्ट्रल, सुजन र रक्तचापसँग प्रभावकारी ढंगबाट लड्छ र मुटु स्वस्थ राख्छ।
१३) औषधिका रुपमा बेथुको जरा, पात र बिउ सबै प्रयोग गरिन्छ। यसका पातहरु र बिउमा प्रोटीन, भिटामिन ए र सी प्रचुर मात्रामा हुन्छ। ऐमरैन्थ अर्थात बेथुको साग एनिमिया रोगसँग लड्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय हो। यसको सेवनबाट शरीरमा रगतको कमीलाई हटाउँछ। शरीरमा रगतको कमी दुर गर्नका लागि यसको सेवन सब्जी वा सुप (झोल)का रुपमा गर्नुपर्छ।
१४) पिसाबमा हुने जलन रोक्नका लागि बेथुको रसको केही दिनसम्म सेवन गर्दा मुत्रवृद्धि हुन्छ र जलन ठिक हुन्छ।
१५) बेथुको सागमा हुने भिटामिन, खनिज र शक्तिशाली एन्टी अक्सिडेन्टले हाम्रो शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउँछ।
१६) यदि तपाईको कपाल समय नपुगेरै युवाअवस्थामै फुल्ने समस्या छ भने बेथुको सागले समाधान गर्नसक्छ। यो कपाल सेतो हुनबाट रोक्न एकदमै प्रभावी उपाय हो। बेथुलाई आफ्नो आहार (खाना)मा समावेश गरे तपाई यो समस्याबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ।